Famahana krizy : Vonona hanolo-tena ny Vondrona Eoropeana -
AccueilRaharaham-pirenenaFamahana krizy : Vonona hanolo-tena ny Vondrona Eoropeana
09/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Iraka manokana. Noraisin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny Lapam-panjakana teny Iavoloha omaly ny iraky ny Vondrona Eoropeana, ny Tale mpitantana momba an’i Afrika ho an’ireo andraikitra ivelany, Koen Vervaeke. Niara-dia taminy tamin’izany ny lehiben’ny delegasion’ny Vondrona Eoropeana eto Madagasikara, Antonio Sanchez-Benedito.
Nanamarika ny tanjon’izao iraka ampanaovina azy izao i Koen Vervaeka. « Niara-dia hatrany tamin’i Madagasikara ny vondrona Eoropeana. Fivahinianana faha-4 no ataoko eto Antananarivo izao, tamin’ny taon-dasa dia tao anatin’ny iraka fanaraha-maso ireo fifidianana taloha, ary amin’izao fotoana dia ho an’ny fifidianana ho avy », araka ny fanazavana nentiny. « Ny fahatongavanay dia fanehoana fiaraisankina amin’ny vahoaka malagasy noho ny zava-nisy ny 21 avrily teo sy ireo niharam-boina ary hanohana ny ezaka efa misy ataon’ireo iraka avy amin’ny vondrona iraisam-pirenena mba handaminana ireo fomba fijerin’ireo mpanao politika samihafa », hoy hatrany izy. Nanamarika hatrany ity iraky ny Vondrona Eoropeana ity fa « ilaina ny mihaino ny filohan’ny repoblika, ary mino aho fa mitovy ny tanjontsika dia ny hananana fifidianana azo itokisana, ary eken’ny vahoaka malagasy izay hoe fifidianana madio mangarahara ary eken’ny rehetra ».
Mikasika ny fifandirana amin’izao fotoana, dia nanamarika ny iraky ny vondrona Eoropeana Koen Vervaeke fa « mahatsapa ny finiavana hikaroka vahaolana politika aho, satria izany no hampientana ny rehetra hihaona amin’ireo mpanao politika hafa aoriana ».
Anisan’ireo manampy sy manosika antsika eo amin’ny fampandrosona i Madagasikara toa ireo vondrona iraisam-pirenena hafa ny Vondrona Eoropeana. Ny fisian’io iraka io dia manamafy ny ahiahin’izy ireo amin’ny fiverenana amin’ny filamina na ara-tsosialy sy ny fahatoniana.